Hadafkeena – Abschir Hassan Foundation
Waxan rabnaa in aan Dhalinyarada iyo Caruurta Jiran, Xarun uga yagleelno regionka Dawlad Puntland e Zentral-Somalia, Xaruntaas oo ka koobanan doonta, Hoy, center Waxbarasho iyo Farsamada gacanta. Xaruntu waxay kaloo dabooli doonta baahida, Caafimad iyo therapeutic, ee Caruurta ku haysa Wadanka.
Waxan isku dayi donaa, in aan familada haysta caruurta caafimadkooda culus yahay, ka caawino fahmida Cudurada Caruurta haya iyo meelahay ka so farcameen, waxan kalo ka caawin doonaa, barashada xanaanayta caruurta jiran, xag caafimad iyo therapeutic. Caruura badan yio Waaridkaba waligood ma helin, baaritan caafimad, sida darted, Waarid badan Kama warhayaan, xanuunada dhalaankoodu la ildaran yahay.
Caawin Shakhsiyan ama private support
Kahor intaanan aasaasin foundation keenan curdunka ah, waxan si private ah Gacan uga gaysanay Familkan haysta Toban Caruur ah, Afar kamid ahna disable tahay, Sadex waxay jiradu ku bilaabtay markay jireen Dada Labo Sano, Gabadha Afaraad markay dhalatay. Labo sano kahor Aabihii Reerka ayaa Geeriyooday. Wixi Geerida Odayga kadanbeeyay, Hooyada Noloshi familkan weyn, wayku adkaatay say u Maarayn lahayd, supply, ayadoo u dheerayd Hoy laan.
Ehel Somaliyeed oo ku kala Nool, Europe, Canada iyo wadanka gudihisa, ayaa familka u Gurmaday,dhaqaale uruuriyay, Hooygan yare Maanta ku Nool yihiin u dhisay. Sidaadka daalacan kartid sawirada iyo Videogan aynogu tabaruceen inaan Homepage kayaga kusoo bandhigno, Maanta nolol wax yar dhaanta tiihore ayay ku nool yihiin.
Hoyga ama Guriga Caruurta
Gurigan waxan ku hamiyaynaa in Caruurta jiran,Hoy u noqdo ayku nooladan,waxa naloogu xog waramay, in Magalada Galkacayo iyo Agagaaraheeda ku nool yihiin,Caruur tiradooda gaarayso ilaa 300 oo Caruur, isagu jirta kuwa xaaladooda fudud dahay iyo kuwa xaalado culus ku jira.
Qabashada Caruurta e Hoyga
Waxan rajaynaynaa in Hoygan u Hoy u noqdo ilaa caruur 50 gaaraysa, u dhaxaysa dada (4 ilaa 15 jir): Waxan ku kala xulan doona ,hadba culayska caafimad iyo marxalada familka haysta ee dhaqaale iyo kala fogaansha deganka, Hoyga iyo deganka familka.
Xarunta Waxbarasho iyo Farsamada gacanta
Xarunta waxbarasho iyo farsamada gacantu waa isku goob, hal Daar ama Guri. Waxan waxku bari doona, dhalinyarada iyo caruurta dagan Maglada Galkacayo iyo aageeda, Dhaliyarada iyo caruurta, Qaybna Galinka hore, Qaybna Galinka danbe, ayay u kala qabsami doonaan, mudnaanta, priority, waxan u kala siindoona, hadba inta Garaadka maskaxda fahamkooda yahay, waxan ku dadaali doonaa, dhisida kalsoonidooda iyo intay rabtaba hagaarteen, ka maarmida qofkale baahidiisa.
Medical staff,shaqaale caafimad
Dhib wuxu ka imaanayaa, helida shaqaale u carbiyaysan, xanaanayta iyo haynta caruurta disabled, sidaa daraadeed, waxa lagama maarman ah in Shaqaale loo tababaro, korinta, xanaanayta iyo waxbarida, caruurtaa. Sida , doctors,nurses, social workers. Tababarkaas o ay kaga faaíidaysan doonaan, qabashada hawl muhiim ah, iyo helitaanka perspective wadankooda gudihiisa ah, ama gudashada waajibka dadkooda. Ula jeedkayagu waa in aan Xaruntan ka siino dhalinyarada fursado, workplace, training place, ay wadankooda gudihiisa kaga faaíidaystaan, umadoodana uga faaiideeyan, waxan rabnaa in dhalinyaradu fahanto ,Baahida dadkooda iyo dalkooda u qabo, ogaadan in baahida Yurub looga qabin, fursada iyo horumarka aad dalkaga ku heli karto Yurub ma taal, waayo dhalintoodi o aqoon leh ayaa dhooban.
Inkasta oo Somlia 1991 igu danbaysan, hadana dhibka ka jira wadanka kamaan war laáyn, waxa jira dad badan o qurbaha katagay, waxna ka qabta dhanka caafimadka, arimaha Bulshada iyo qaybaha maamulka. Sanadkan dhamaadkiisa ayaa Anigu u socdaalin, mud 10 ilaa 14 maalmod ah Puntland Somalia, Gobolada Puntland waxay samaysteen maamul u gaar ah, kana mid ah, Dawlada Federaaliga Soamliya, waxa la i Iclaamiyay in Dhul baaxad leh, Nalaka siin doono foundation ahaan area ama agagaarka Magalada Galkacayo, waxan rajayn in dhulkaas u kayaraan hal kilomitir isku weer, madama aan rabno, in aan ka dhisno lama Xarun, mid waxbarasho iyo mid Hoy u noqota caruurta jiradoodu culus tahay.
Somalia waa wadan aad u qalalan, ama Roob badan helin, sidaa darted waa muhiim in aan ceel biyood qodnaa, sidan ugu abuur lahayn Dhir badan oo waaweyn iyo Geedo cagaaran oo ubaxyo leh, meelo biyo fariisad leh, maadama cagaarka iyo biyahaba looga maarmin caafimadka iyo Nolosha quruxdeeda. Sidoo kale waxan rajaynaynaa in aan Qoraxda iyo kulayka wadanka ka jira uga faaíidaysano,dhanka koronto dhalinta ama waxa lo yaqaan,solar systems. Wakhtigan xaadirka oo wali dhismo bilaabin, waxan kharashka ku qorshaynay galya, mashruucan, lacag gaaraysa ilaa 500.000 euros ah. Si aan kharashkaas u dhino, waxan Rajaynaynaa in Organization, dibada iyo gudahaba ka jira, sido kale societies, company, hospitals iyo facilities kalaba, in ay partners nala noqdaan, naguna caawiyaan wixi material ah o ay awoodan, waayo caawinad dhanwalba ah ayaan u baahan nahay.
Hadafka foundation ka oo Kooban
Waxan taaganahay bilaw, waxanse tiigsanaynaa mustaqbal fog, waxanu leenahay Himilooyin sare, o ka turjumaya, mustaqbalka dhaw iyo midka fogba ee Foundation kan.
Caawinta Familada caruurta disabled haysta.
Yagleelida Xarun iyo Hoy, caruurta subaxa hore iyo galinka danbe, wax lagu baro, laguna hayo.
U turida ama wakhti siinta familada caruurta jiran haysta.
Kataxadarida iyo barida xanaanayta, raxmad u yeelida caruurta jiran.
U bayaaminta jirooyinka caruurtan haysa, waaridka dhalay caruurta iyo hab dhaqanka wanaagsan e caruurta jiran lola macaamilo.
La xiriirinta dhakhaatiirta iyo hospital ka,si caruurtu u helaan baaritan caafimaad o joogto ah,Xarunta dhexdeeda.